Nhau - Mapurojekiti maviri e180m3 LNG matangi emafuta akaitwa neBTCE akapedzwa zvinobudirira uye akaunzwa!
Musi waChivabvu 21, 2021, Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. yakazvimiririra, yakagadzira uye yakagadzira maviri 180m3 Marine matangi (kusanganisira TCS system), ayo akapedzwa zvinobudirira uye kutumirwa.
Iwo maviri 180m3 Marine deck matangi achaiswa kune 8,500m3 C-tangi yakatsaurirwa LNG yemafuta echikepe chirongwa.
Zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi, dhizaini yedhizaini inotora yakakwira vacuum yakawanda-layer insulation dhizaini kuti ideredze giravhiti yetangi, uye inoona sisitimu yekushandisa yakabatanidzwa mumusoro mumwe chete wetangi, inogona kushandiswa kubata mvura nitrogen uye LNG maviri. midhiya, uye inoziva zvizere kushandiswa kwayo semafuta emagetsi system kupa simba rekuzadza ngarava. Zvakare akati wandei emabasa senge pre-kutonhora uye kupinza emvura matangi anotakura zvinhu uye matangi emafuta ezvimwe ngarava dzekunze dzeLNG aonekwa.
BTCE yanga ichiomerera kune "inoenderera mberi innovation, sevhisi vatengi" bhizinesi uzivi, kuitira kuti ive nechokwadi chekuti vatengi vane zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kambani yedu yakanyatso kuita yakaderera tembiricha yekuyedza pane ino 180m3 tank, mhedzisiro yebvunzo yakanaka, yave yakanyanya. inozivikanwa neChina Classification Society (CCS)
Nguva yekutumira: Aug-17-2021